Kwado ICRA ma gosi ọdịnaya dị na saịtị gị | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 19, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ngalaba Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi bụ na-akwado mkpebi na ịkọ aha na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ọdịnaya anaghị emebi okwu efu gị. Ọ bụ ezie na m na-akwado Nchịkwa Electronic Frontier Foundation, nke a bụ otu okwu m na-ekwenyeghị na ha. Echere m na saịtị kwesịrị ịkpọ aha na Nchọgharị kwesịrị ịnọgide na-asọpụrụ njikwa ndị nne na nna. Ọ ga-amasị m ịhụ ndị Inyocha ọchụchọ na-eji akara ọdịnaya yana:
Inye ebe nrụọrụ weebụ na mkpado ọdịnaya na enweghị mkpesa dị elu ntinye igwe.
Inye ihe Nchọnchọ Nchọpụta dị iche maka ọdịnaya ndị okenye.
Labdebanye aha na saịtị gị dị mfe na nke ICRA Aha jenerato. Gụkwuo banyere ha ọrụ. Ana m akpọ weebụsaịtị nke ndị ahịa m niile, ị ga-emekwa! Usoro akara aha dị mma nke ukwuu, na-enye ndị mmadụ ohere ịkọwa ma a na-agba ọtọ ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ọhụụ karịa n'ụzọ doro anya. Echeghị m na nke a bụ nnukwu nwanne, ndị be anyị. Echere m na nke a bụ naanị ịdọ aka ná ntị iji kpuchido ụmụ anyị pụọ na porn. Ama m na i kwenyere!
Nchịkọta Google ga-eru profaịlụ 50!
Ọkt 5, 2006 na 7:21 AM
M debanyere aha maka nke a. Anaghị m ekwenye na mmachi mana ekwenyere m na ndị mmadụ kwesịrị ịhọrọ nhọrọ. Ọtụtụ mmadụ agaghị achọ ịhụ blọgụ m - ọ na-ekpuchi isiokwu ndị dị ka ọdịnala nwoke nwere mmasị nwoke, amoosu na ikpere arụsị n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka ozi ọma na echiche zuru ezu, yana, n'eziokwu, ọkachasị abụ na edemede ndị ọzọ. Enwere m ike ọ gaghị amasị m na ụfọdụ ga-ajụ ọrụ m dabere na nkwenkwe m kwenyere ma na-etinye nke a na saịtị m, echere m na m na-ahapụ ndị ọzọ ka ha mee ihe ha chọrọ ime ebe m nweere onwe m ime ihe m chọrọ mekwaa!
Nke ọmarịcha. Daalụ maka ozi ahụ. x